​‘बाहुबली ३’ आउला त ? के भन्छन् राजामौली ?
Tue, Jun 19, 2018 | 12:18:02 NST
19:15 PM ( 8 months ago )
असोज २५ – एसएस राजामौलीद्वारा निर्देशित दुई भागमा आएको ‘बाहुबली’ ले भारतीय सिनेमा उद्योगमा मात्रै होइन, विश्वमै सनसनी मच्चायो । यसै वर्ष अप्रिलमा ‘बाहुबली : द कन्कलूजन’ रिलिज भएपछि अब मानिसहरु सोध्न थालेका छन् ‘बाहुबली ३’ कहिले आउँछ ? तर यसको उत्तर राजमौलीसँग छ ।
‘बाहुबलीको तेस्रो भाग बन्दैन । कथा सकिएकाले अब नयाँ भाग आउने भन्ने कुरै छैन ।’ केही दिन अगाडि समाचार एजेन्सी आइएएनएससँग कुरा गर्दै एसएस राजामौलीले आफूले उत्कृष्ट कथाबाट सुरु गरेर दुई भागमा फिल्म सकेको बताएका थिए । उनले भने, ‘अब बाहुबलीमा कुनै कहानी छैन । मलाई थाहा छ, हाम्रो लागि बजार खुला छ । करोडौँ कमाउन सक्छौँ । तर इमान्दार फिल्म मेकिङकबा हिसाबले यो त गलत भयो नि । यदि कथा अपूरो भएको भए चलचित्र बनाउनु खुशीको कुरा हुन्थ्यो । ’
अझ बाहुबलीजस्तै चलचित्र हेर्न चाहनेका लागि एसएस राजामौलीले छिट्टै कुनै चलचित्रमा काम नर्गने बताएर निराश बनाएका छन् । उनलाई महाभारतमा आधारित शानदार चलचित्र बनाउन लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘अहं, अहिले केही होइन । म बिदा मनाउँदैछु ।’ उनले आफूले महाभारतमा आधारित फिल्म अहिले नबनाउने पनि बताए । उनले केही समय पहिले महाभारतमा आधारित चलचित्र बनाउने आफ्नो ठूलो सपना भएको बताएका थिए ।
उनको आगामी प्रोजेक्ट आउनका लागि केही समय लाग्नेछ । कुनै विषयले आफूलाई छोएमा आफूले त्यसैमा काम गर्ने पनि राजामौलीले बताए । उनले ‘बाहुबली २’ ओस्कारमा भारतको अफिसियल इन्ट्रीको रुपमा नचुनिनुमा आफू निराश नभएको बताए । आफूले अवार्डका लागि चलचित्र नबनाउने पनि राजामौलीले प्रष्ट पारे । ‘बाहुबली’ ले भारतीय चलचित्र उद्योगका धेरै रकर्ड तोडेको थियो । चलचित्रको दोस्रो भागले वल्र्डवाइड १७ सय करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरेको थियो ।